Forex mgbanwe udu emelitere: 11/04/2021 08:44
Yen - Nigerian naira price ugbu a na Forex mgbanwe ahịa na 11 April 2021
08:44:51 (Forex ọnụego update na 59 Sekọnd)
1 JPY = 3.47 NGN
1 NGN = 0.29 JPY
Ntughari Ego Forex - mgbanwo-ego nke ezigbo oge mgbanwo ahia. Ọnụego mgbanwe nke Yen ka Nigerian naira na mgbanwe mgbanwe ego ngbanwe 3.47 Nigerian naira. Otu ugboro kwa sekọnd iri atọ, Yen agbanweela ọnụego mgbanwe ego. Ọnụego mgbanwe nke Yen na Nigerian naira na Forex kwa nkeji, elekere, izu ma ọ bụ n'ọnwa.
Forex trading chaatị Nigerian naira - Yen -ebi, 11 April 2021
Forex trading chaatị Yen Ka Nigerian naira -ebi, 11 April 2021
Jiri usoro mgbanwe mgbanwe nke Yen ka Nigerian naira na 11 April 2021. Chaatị dị n’elu bụ visual visual nke Yen ka Nigerian naira. Jiri eserese mgbanwe iji ghọta mgbanwe mgbanwe mgbanwe mgbanwe ngwa ngwa. Eserese nke Yen nke Nigerian naira na-agbanwe ozugbo sekọnd 30 ọ bụla.
Tọghata Yen Ka Nigerian naira Yen Ka Nigerian naira Ọnụego mgbanwe Yen Ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme
Online trading Yen (JPY) na- Nigerian naira ugbu a
Akụkọ ihe mere eme nke Yen ka Nigerian naira kwa nkeji. Mgbanwe nke Yen (JPY) na Nigerian naira na nkeji a. E gosipụtara akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na nkeji ikpeazụ. Izipu ozi di nkpa na ntaneti na saiti.
Online trading Yen (JPY) na- Nigerian naira awa ikpeazụ trading
Anyị na-egosi ọnụego mgbanwe site na awa ruo elekere. Mgbanwe nke Yen (JPY) gaa Nigerian naira n'oge elekere a. Ọnụego mgbanwe kwa elekere nke Yen n'aka Nigerian naira na tebụl ahụ ruo awa iri. A na-etinye ụkpụrụ nke Yen US> kwa elekere na tebụl ka ọ dị mma ịhụ ọdịiche ahụ.
Online trading Yen (JPY) na- Nigerian naira taa na-emekarị 11 April 2021
08:44 07:43 06:43 05:43 04:43 03:43 02:43 01:43 00:43 23:42